अभिनेता संजय दत्तले पाए युएईको गोल्डन भिषा — Sanchar Kendra
१नारायणी नदीले चेतावनीको तह पनि पार गर्यो, सतर्क रहन आग्रह
२शिल्पी संघ नेपाल- कुवेतको सहयोगमा १६ अशक्तसहित १८ परिवारलाई राहत वितरण, हेर्नुहोस १२ तस्विरमा
३एमिकस क्युरीमा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे र केसीलाई पठाउने सर्वोच्च बारको निर्णय
४बन्दाबन्दीमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खुल्यो, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
५थप २७४५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ४१ को मृत्यु
६ट्यांकर चालकहरूको आन्दोलन फिर्ता, सकारसँग के के भयो सहमति ?
७निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्वाग्रही भयो- उपेन्द्र यादव
८नदी किनाराका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
९यी स्थानहरुमा हुनेछ यो साता भारी बर्षा, सचेत रहन आग्रह
१०पाँचतारे होटलमा यस्तो का’ण्ड मच्चाईरहेकी थिइन् अभिनेत्री शाह, प्रहरीले गर्यो पक्राउ
११नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा ठाउँठाउँमा खस्यो ढुङ्गा, नदि किनाराका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह
१२मुस्ताङको लुप्रा खोलामा बाढी, लुम्ले र घोरेपानी क्षेत्रमा ख’त’राको साइरन बज्यो
१निषेधाज्ञामा आफ्ना ग्राहकलाई नेपाल टेलिकमको नयाँ योजना
२ओलीलाई विप्लवको कडा कडा चेतावनी, नागरिकता अध्यादेशबारे निकाले यस्तो विज्ञप्ति
३विवेकशील साझाका नेता उज्वल थापाको निधन
४कोरोना लागेपछि छविले लेखे यसबाट ब’च्ने उपायहरुबारे पढ्नैपर्ने स्टाटस्
५नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ
६आजदेखि थपिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ? हेर्नुहोस बिस्तृतमा
७समयमा नै दोस्रो डोज खोप नपाए के हुन्छ ? यसो भन्छ डब्ल्यूएचओ
८नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने अमेरिकाकाे घोषणा
९कोरोना बिरुद्ध ललितपुरमा नेकपाको जनसहयोग एवं हातेमालो अभियान सुरु
१०सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गरेको खण्डमा एमालेले स्वीकार्छ- नेता बोगटी
११देवकोटासँग पराजित भएका बादलले फेसबुकमा लेखे यस्तो स्टाटस, कसलाई के भने ?
१२काठमाडौँ उपत्यकामा लागु भयो अहिलेसम्मकै यस्तो कडा नियम, जारी भयो सूचना
अभिनेता संजय दत्तले पाए युएईको गोल्डन भिषा
बलिउड अभिनेता संजयदत्त युएईको गोल्डेन भिषा प्राप्त गरेका छन् । जसको जानकारी अभिनेता दत्तले सामाजिक संजालबाट शेयर गरेका हुन् । भिषा प्राप्त गरेको खुसी शेयर गर्दै संजयले युएई सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएका छन् ।
गोल्डेन भिषा लामो समय बस्न दिइने अनुमति हो । जसको सुरुवात २०१९ मा दुवईको प्रसासकले गरेका थिए । जसको जारी २०२० बाट सुरु गरिएको हो ।
१० वर्ष अवधि रहने यसको मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई गल्फ राष्ट्रमा राख्नु रहेको छ । यो भिषा विशेष गरेर पीएचडी होल्डर, डाक्टर, इन्जिनियर्सलगायतलाई दिने गरिन्छ । बलिउड फिल्म उद्योगबाट यो भिषा प्राप्त गर्ने अभिनेता दत्त पहिलो ब्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै सलमान खानको फिल्म ‘राधे’ ले राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छैन । जसकारण सलमान आफैं हैरान छन् । र, सलमान खानको लिगल टिमले समीक्षक कमाल राशिद खान (केआरके) विरुद्ध मानहानीको मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
केआरकेले आफैं ट्वीटरमार्फत यसको जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै, अब सलमानको कुनै पनि फिल्मको रिभ्यु नगर्ने घोषणा समेत केआरकेले गरेका छन् । उनले सलमानप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भनेका छन्,‘तपाईले राम्रो फिल्म बनाउनुपर्ने थियो ।’
केही दिनअघि आफ्नो एक ट्वीटमा केआरकेले राधे फिल्मको जमेर आलोचना गरेका थिए । उनले भनेको थिए, ‘फिल्म राधेमा के खास छ, यो मलाई थाहा नै भएन ।’ उक्त फिल्म दुबईमा हेरेको र फिल्मको पहिलो हाफ हेरेलगत्तै आफुले रिभ्यु गरेको पनि उनले ट्वीटमा उल्लेख गरेका थिए । आफुलाई सलमान खानको टिम मन नपरेको पनि उनले समीक्षाका दौरान बताएका थिए ।
यस्तै बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तका बुबा स्वर्गीय सुनील दत्तले एक से एक राम्रा फिल्ममा काम गरेका थिए । उनको अभिनयको मानिस दिवाना थिए । सुनीलको भौतिक शरीर यो संसारमा नरहे पनि उनका प्रशंसक आज पनि उनको सम्झना गर्ने गर्दछन् । सुनील दत्तले २००५ मे २५ मा यो संसारबाट सदा सदाका लागि बिदा लिएका थिए ।
बुबाको पुण्य तिथि पारेर सञ्जयले बुबासँग भएको एक तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्दै भावुक पोष्ट गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘आमाबुबा, एक आदर्श, एक साथी, एक गुरु तपाई मेरो सबथोक हुनुहुन्थ्यो । लभ यु बुबा, मिस यु ।’ सञ्जयले शेयर गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
सञ्जय अहिले जुन उचाईंमा छन् । त्यो हुनुमा उनको आमा बुबाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । सञ्जय दुबैको नजिक थिए । आमा नरगिस गुमाइसकेका सञ्जय बुबा सुनीलको निधनले निकै दुःखी छन् । सुनीलको निधन हृदयघातका कारण भएको हो । निधनको १२ दिनपछि उनको ७६ औं जन्मदिन थियो । सुनील पछिल्लो समय ‘मुन्नभाई एमबीबीएस’ मा देखिएका थिए । सञ्जयले केही अगाडि पनि आमा नरगिसको सम्झनामा एक भावुक पोष्ट शेयर गरेका थिए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
बलिउड- हलिउडल सँग सम्बन्धित
पाँचतारे होटलमा यस्तो का’ण्ड मच्चाईरहेकी थिइन् अभिनेत्री शाह, प्रहरीले गर्यो पक्राउ
राष्ट्रिय स्तरको युटिसी म्युजिक फेस्ट भब्यताका साथ सम्पन्न
यौ’नकर्मी सम्झिएर चर्चित भारतीय अभिनेत्री शर्मालाई कसले गर्यो भेदभाव, आफैले गरिन यस्तो खुलासा
प’क्राउ परेका अभिनेता करणको दुखेसो- श्रीमती बेस्सरी चिच्याईन अनि… गरेर मलाई फसाइन्
फिल्ममा काम गर्न हिरोसँग रात बिताउने सर्त थियो- अभिनेत्री मर्चेट
मेरो पिता नै थिए मेरो ब्वाईफ्रेन्ड- अभिनेत्री नीता
विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हातपात, भाइरल बनेको भिडियोसहित
आमा बन्न किन डराइन् चर्चित भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंह ? आफैले खोलिन यस्तो रहस्य
क्रान्तिकारी आन्दोलन र नवसंशोधनवाद
हरि बहादुर चन्द
पत्रकारको चुनावले ओलीलाई सिकाएको सवक
ऐतिहासिक महान नेपाली जनयुद्धको समिक्षा र शिक्षा
२६ औं जनयुद्ध दिवस र वैकल्पिक सत्ताको प्रश्न
इमान्दार मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित सञ्चारकेन्द्र नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु मध्ये एक हो । परिवर्तनका पक्षमा निर्भिकताका साथ उभिने यो जनपक्षीय अनलाइन मिडिया २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ ।
‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’ बनिरहेको सञ्चारकेन्द्र पाठकहरुले दिनुभएको अत्याधिक मायाका कारण सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने मुलधारको ठुलो मिडियाकारुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
इमान्दार मिडिया प्रा.लि.
दर्ता नम्बर : १५८/०७३-७४
दिपक बहादुर बुढा
हरि बहादुर बस्नेत
Copyright © 2016-2020 SancharKendra | Powered By EasySoftnepal